काठमाडौं । सम्पर्क विहीन बनेको तारा एयरको ट्विनअटर विमानबारे सम्भावित दुई ठाउँको पहिचान भएको छ । जहाज मुस्ताङको टिटी लेक वरपर र लार्जुङ क्षेत्रलाई सम्भावित क्षेत्र मानेर खोजी गर्ने तयारी भइरहेको म...
newsofnepal.com . १ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
अविरल बर्षाको कारण बाढीमा ३७ को मृत्यु
एजेन्सी । भारी वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीमा परेर उत्तरी ब्राजिलमा कम्तीमा पनि ३७ जनाको ज्यान गएको छ । उत्तरी ब्राजिलको रेसिफ सहर र त्यस वरपरको भारी वर्षाले ती नागरिकको ज्यान गएको यहाँका अधिकारीहरुल...
newsofnepal.com . ३ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पोखरा । जहाज दुर्घटना भएको आशंका गरिएको लार्जुङबाट आर्मी फर्किएको छ । केही समयअघि त्यसतर्फ गएको आर्मीको टोली कोवाङतर्फ नै फर्किएको हो । अझै दुर्घटनास्थल एकिन हुन सकेको छैन । लार्जुङका स्थानीय शिक...
newsofnepal.com . १३ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । झण्डै तीन घण्टादेखि सम्पर्कविहीन रहेको तारा एयरको टुइनअटर नाइन एनएइटी जहाजको खोजी तीव्ररुपमा भइरहेको छ । नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रले विज्ञप्ति...
newsofnepal.com . १८ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
बन्दुकको पहुँच भएका किशोर–किशोरीमा आत्महत्या प्रयासको जोखिम उच्च
न्युयोर्क । बन्दुकको पहुँच भएका किशोररकिशोरी आत्महत्या वा आत्महत्या प्रयासको उच्च जोखिममा हुने एउटा नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ । जुनसुकै कारणले अस्पतालको आकस्मिक विभागमा आउने एक तिहाई अमेरिकी वयस्...
newsofnepal.com . २० मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
बस दुर्घटना हुँदा आठको मृत्यु २० जना घाइते
एजेन्सी । यहाँबाट करिब १८० किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित बरिसाल जिल्लामा आइतबार बिहान यात्रीले खचाखच भरिएको एउटा बस रुखमा ठोक्किँदा कम्तिमा आठ जनाको मृत्यु हुनका साथै अन्य २० जना घाइते भएका छन् । रातभ...
newsofnepal.com . २७ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
जहाजमा अर्का पाइलट लामा पनि थिए, जो बिदा मनाउन जोमसोम जाँदै थिए
काठमाडौं । आइतबार सम्पर्कविहीन तारा एयरको जहाजमा चालक दलका तीन जना सदस्यसहित २२ जना यात्रु सवार थिए । जसमा दुई जना तेस्रो मुलुकका र चार जना भारतीय नागरिक थिए । उक्त जहाजमा तीन जना चालकदलका सदस्यसह...
newsofnepal.com . ३१ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण विदेशी भूमिमा हुन नसकेको नेपाली फिल्मसम्बन्धी गतिविधि बढ्ने संकेत देखिएको छ । थर्ड आईको आयोजनामा बेलायतको राजधानी लन्डनमा पाँच दिने ‘नेपाली फिल्म फेस्टिभल इन लन्ड...
newsofnepal.com . ४१ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ । सरकारले मुस्ताङमा हराइरहेको तारा एयरको विमानको खोज तथा उद्धारमा सघाउन स्थानीय बासिन्दसँग अनुरोध गरेको छ । त्रिभूवन विमानस्थल कार्यालयले स्थल र हवाइमार्गबाट विमानको खोजी भइरहेको उल्लेख ...
आईपीएल फाइनल : राजस्थानका यी तीन खेलाडी जो गुजरातका लागि खतरा हुन सक्छन्
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को उपाधिका लागि आज राजस्थान रोयल्स र गुजरात टाइटन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। विश्वकै चर्चित लिग आईपीएलको फाइनल रोचक हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वका स्टार खेला...
newsofnepal.com . ५० मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
लार्जुङका शिक्षक बीरेन्द्र भन्छन्ः विमानको आवाज सुनेका थियौं, आर्मीको टिम जाँदै छ
पोखरा । पोखराबाट आइतबार बिहान मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज लार्जुङ आसपास दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ । त्यहाँका एकजना शिक्षक वीरेन्द्र लामिछानेका अनुसार लार्जुङमा एसेम्ब्ली गर्न...
newsofnepal.com . ५९ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
बलिउडका सुल्तान सलमान खान फिल्म दुनियाँमा सबैभन्दा ठूलो सुपरस्टार हुन् । आफ्नो फिल्ममा भयंकर एक्सनका लागि प्रख्यात सलमान केही फरक कुरामा शौखिन छन् । चाहे त्यो शरीर बनाउने मामलामा होस् या सडकमा साइक...
newsofnepal.com . १ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पाकिस्तानका एक नागरिकले आफ्नी छोरी बिक्री गर्न नदिएको झोकमा श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । पाकिस्तानको लक्की शाह सदर इलाकाका जुल्फिकार जिस्कानीले आफ्नी नाबालिग छोरीलाई धेरै रकम लिएर विवाह गराउन खोज्दा...
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्पर्क विहीन रहेको तार एयरको टुविन्अटर ‘नाइन एनएइटी’ जहाजको खोजी कार्यमा मौसम बाधक बनेको जनाएको छ । प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दैै प्रतिकुल मौसमक...
newsofnepal.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । श्वेत–गङ्गा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्नसक्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा कम्पनीले स्थानीयवासी...
माल्दिभ्सको उषाको टिमविरुद्ध कामना सम्मिलित पुलिसको जित
काठमाडौं । माल्दिभ्समा जारी भलिबल एसोसियसन कप २०२२ प्रतियोगितामा नेपाली महिला राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी सदस्य कामना विष्टसम्मिलित पुलिस क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा क...
सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध आन्दोलन चर्किदै (फोटो फिचर)
बारा । निजगढमा निर्माण हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा निजगढस्थित सहिद चोकमा स्थानीय युवाले पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा धर्ना र चक्का जाम गरेका छन् ।...
काठमाडौं । पोखराबाट उडेर बेपत्ता भएको तारा एयरको जहाजमा चालक दलका सदस्यसहित २२ जना रहेका खुलेको छ । जसमा चालक दल तीन सदस्यसहित १६ नेपाली, चार भारतीय र दुई जर्मनी छन् । जहाजमा चालक दलका क्याप्टेन ...
पोखरा । पोखरादेखि मुस्ताङ जाने क्रममा सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको ट्विनअटर जहाज खोज्न परिचालन गरिएको फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर प्रतिकूल मौसमका कारण जोमसोम फर्किएको छ । मौसम खुल्नासाथ खोजीकार्यका ल...
सम्पर्कविहिन जहाजको खोजीमा हेलिकप्टर उडिरहेको छ, दुर्घटनाको आधिकारिक जानकारी छैनः मुस्ताङ प्रजिअ
म्याग्दी । आज बिहान पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एअरको जहाज अहिलेसम्म भेटिएको छैन । बिहान ९ बजेर ५५ मिनेटमा जोमसोमका लागि उडेको तारा एअरको नाइन एनएईटी ट्वीनअटेर जहाज सम्पर्कविहिन भएको हो । अ...
दुर्घटनाग्रस्त बिमान खोज्न सेनाको हेलिकोप्टर उड्यो
काठमाडौं । पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमकालागि उडेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भएपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर खोजी कार्यको लागि काठमाडौबाट उडेको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेनाको हेलिकप...
बेपत्ता बिमान खोजी तीव्र पार्न गृहमन्त्री खांडको निर्देशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले तारा एयरको सम्पर्कविहीन विमान खोजी तीब्र पार्ने सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहिन भएपछि गृहमन्त...
पोखरा । पोखराबाट उडेको तारा एयरको जहाज अझै सम्पर्कमा आएको छैन । जोमसोमका लागि उडेको उक्त जहाज मुस्ताङको लेतेमाथीको डाँडामा दुर्घटना भएको आशंका गरिएको छ । तर, पुष्टि भएको छैन । जोमसोमबाट भर्खरै खो...
बेपत्ता बिमान खोज्न हेलिकोप्टर परिचालित
काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको जहाज सम्पर्कविहीन भएपछि खोजीका लागि हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको छ । खराव मौसमका कारण हेलिकोप्टर उडेको भएपनि संभावित दुर्घटनास्थल तर्फ भने जान सकेको छैन । जोमसो...
newsofnepal.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पोखरा । पोखराबाट उडेर बेपत्ता भएको जहाजमा चालक दलसहित २२ जना रहेको खुलेको छ । चालक दलका तीनसहित १९ यात्रु गएको विमानस्थलले जनाएको छ । चालक दलमा क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे र उत्सव पोखरेल तथा एयर हो...
सम्पर्कविहीन जहाज अपडेट : मुस्ताङ क्षेत्रमै दुर्घटना भएको अनुमान
पोखरा । पोखराबाट उडेको जहाज सम्पर्कविहीन भएको छ । तारा एयरको जहाज १७ मिनेटमा पुग्नुपर्नेमा डेढ घण्टासम्म सम्पर्कमा नआएपछि अहिले खोजी सुरु भएको छ । म्याग्दीका स्थानीयको अनुसार उक्त जहाज म्याग्दी क...
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता आमीर खानको फिल्म ‘लाल सिंह चड्डा’ दर्शकका लागि प्रतिक्षित फिल्म हो । यो फिल्म ११ अगष्टमा रिलिज हुँदै छ । फिल्ममा आमीरसँगै करिना कपुर प्रमुख भूमिकामा छन् । फिल्मको ट्रेलर २...
तारा एयरको बिमान बेपत्ता
काठमाडौ । पोखराबाट जोमसोमकोलागि उडेको तारा एयर सम्पर्क बिहीन भएको छ । १८ यात्री लिएर उडेको उक्त बिमान सम्पर्क बिहीन भएको नागरिक उड्डयन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
newsofnepal.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बैठक आज बस्दै छ । दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुनेछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद् ...
भारतको सहयोगमा मुस्ताङको लोमान्थाङमा गुम्बा र विद्यालय भवनको उद्घाटन
काठमाडौं । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ गाँउपालिका–३ छोनहुपस्थित श्री पाल एवं नाम्ग्याल गुम्बा विद्यालयको स्तरोन्नत भवनको उद्घाटन गरिएको छ । भारतीय राजदूतावास काठमाडौंक...
आम नागरिकले कहिले नयाँ ट्याक्सी चढ्न पाउने सरकार ?
वागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न दबाब दिइरहेको पाइन्छ । यातायात व्यवसायीहरूले यातायातमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएको हुन् । नयाँ ट्याक्सीको ...
बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकको एकाधिकार किन आवश्यक ठानिन्छ, अहम् प्रश्न हो । यसै पनि बौद्धिक सम्पत्ति पहिल्याउन लामो समयको मेहनत, प्रयास र लगानी आवश्यक पर्दछ । बौद्धिक सम्पत्ति राज्य, समाज,सर्वसाधारण...
कार्यपालिका सदस्यमा एमालेका उम्मेदवार निर्विरोध
पर्वत । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य पदमा नेकपा एमालेका उमेदवार सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन । कार्यपालिका सदस्य पदको निर्वाचनमा नेकपा(एमाले)को तर्फबाट मात्रै उमेदवारी परेका कारण...
newsofnepal.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
कञ्चनजंघाबाट १५ हजार किलोभन्दा बढी फोहोर संकलन
फुङलिङ । ताप्लेजुङकोमा अवस्थित विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजंघा हिमालको आधार शिविर क्षेत्रमा करिव साढे १५ क्विन्टल फोहोर संकलन गरेका छन् । सफा हिमाल अभियान अन्र्तगत नेपाली सेनाले सो फोहोर संकलन गर...
रेसुंगाका अध्यक्ष आफैं बेल्चा बोकेर सडकमा
गुल्मी । गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्षले बेल्चा लिएर सडकका खाल्डा पुर्न उत्रिएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम तम्घासको गुल्मी अस्पताल नजिकै रहेको सडकमा परेका खाल्डा पुर्न वड...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रलाई संसारकै उत्कृष्टमध्येको एक शासन व्यवस्था भएको बताएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पूरा भएर १५ वर्षमा लागेको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेल...
कान्सको रेडकार्पेटमा अनौठा पहिरन सुरक्षा परिन् उत्कृष्ट १५ भित्र
विश्वभरका फिल्मकर्मीको उत्सवका रुपमा लिइने कान्स फिल्म फेस्टिभलको ७५औं संस्करण शनिबारसम्म चल्यो। यसपटक कान्स फिल्म फेस्टिभलको रेड कार्पेटमा आधिकारिक रुपमा पहिलोपटक नेपाली अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले प...
newsofnepal.com . ६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे शीर्ष नेताहरूबीच छलफल
काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाकाबारे शनिबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा शीर्ष नेता तथा विज्ञहरूबिच छलफल भएको छ । नेकपा (माओवा...